Isazi Semidiya Yezenhlalo
NgoLwesibili, ngoJulayi 14, i-2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kodwa futhi namhlanje bengimenywe emicimbini embalwa - mathupha nange-webinar - ukuthola ukutholakala ku ingcwethi kwezokuxhumana nokuthatha kwabo ukumaketha kwezokuxhumana. Njengoba ngibukeza amaphrofayli abo, imininingwane yabo ye-LinkedIn, amasayithi abo kanye namabhulogi abo, angitholi lwazi oluningi olusekela umbono wokuthi bangongoti bezokuxhumana.
ezokuxhum uchwepheshe? Ngempela? Mhlawumbe banamashumi ezinkulungwane zabalandeli be-Twitter, amakhulukhulu okuphawula kubo Facebook wall, nobulungu kumanethiwekhi ayishumi nambili. Mhlawumbe ngoba bayi- charlatan, ushaka noma i-geek.
Yini engingayihlukanisa njengomphakathi wezokuxhumana uchwepheshe? Ngiyaluthanda uhlu lukaPeter Shankman iziqu kanye nokungafaneleki kochwepheshe bezokuxhumana. Ngingeza - ukuthi uma kumayelana nebhizinisi - ngithanda ukubona ifayela le- uhlu olude lokulinganisa imiphumela nezinkomba ezinhlobonhlobo zezinkampani namasu.
Ingabe ngizihlukanisa njengo uchwepheshe? Ngiyakwenza - kodwa hhayi ngoba ngithi ngiyakuqonda konke. Lesi yisikhungo esincane futhi siyashintsha nsuku zonke. Ishintsha indlela yokuziphatha kwebhizinisi. Ishintsha indlela yokuziphatha yabathengi. Iminyaka eyishumi yokuhlangenwe nakho kwami ​​okuvela ekumaketheni okuqondile nasekuthengisweni kwe-database, ukumakethwa kwe-imeyili, njll.
Angizibizi ngongoti ngenxa yolwazi lwami lwezokuxhumana… Ngizibiza ngongoti ngenxa yomsebenzi engiwenzele izinkampani ezinkulu nezincane ukukhulisa ibhizinisi labo, ukugcina nokuthengisa amakhasimende, nokunciphisa izingcingo zokuhlinzeka amakhasimende ngu sisebenzisa ngempumelelo imithombo yezokuxhumana.
Ngabe ngizibiza ngongoti ngenxa yomsebenzi engiwenzayo njengamanje?
Nakuba I-VP yesikhulumi sokubhuloga, sisize amabhizinisi amaningi athuthukisa imithombo yawo yezokuxhumana namasu okusesha ukushayela imizamo yokumaketha engenayo.
Nginompumelelo I-New Media Agency ngomlando oqinile wokusiza izinkampani ukuthi zithuthukise futhi zisebenzise amasu azo ezenhlalo.
Ukuhlanganiswa namathuluzi we-automation engiwakhulisile kufayela le- ibhulogi, imeyili, ividiyo futhi isikhala esingumahamba nendlwana sesifinyelele amashumi ezinkulungwane ezinkampani.
The 2 social amanethiwekhi Ngisizile ukuqala nokuqhubeka nokusiza ukugijima.
I-blog yami uqobo ehlanganisa iminyaka engu-5 + (kanye nokunye okumbalwa kwamanye amapulatifomu) ngikhuluma nemithombo yezokuxhumana nobuchwepheshe bokumaketha.
CHA! Akukho kulokhu okungifanele njenge- uchwepheshe.
Ngizibiza ngochwepheshe ngezizathu ezintathu:
Amabhizinisi afuna Ochwepheshe, hhayi ama-gurus nama-geek.
Ukuzibiza ngochwepheshe ngizibambela ezingeni eliphakeme nokulindelwe nenkampani okufanele ngiyifeze.
Isazi ngumuntu owaziwa kabanzi njengomthombo othembekile wobuchwepheshe noma ikhono elinamandla okwahlulela noma okunquma ngokufanele, ngokufanele, noma ngokuhlakanipha anikezwe igunya nezinga ngontanga yabo noma umphakathi esizindeni esithile esithile esihlonishwe kahle. Isazi, ngokuvamile, ngumuntu onolwazi olunzulu noma ikhono endaweni ethile yokufunda.
Ngihlakaniphe ukwedlula bonke abanye abantu laphaya? Nope.
Ngabe ngazi konke ngemithombo yezokuxhumana? Vele akunjalo.
Ngabe abanye ochwepheshe bavumelana nami njalo? Hhayi ithuba!
Ngabe wonke umsebenzi wami uphumelele? Cha - kepha okuningi kunakho.
Ngiyakholelwa ukuthi ngibe nekhono elivelele lokuhlaziya izinqubo zebhizinisi, izindlela zokumaketha, nokunquma ukuthi ubuchwepheshe bungalivala kanjani igebe. Angazi qamba amanga kumakhasimende ubatshele nokuthi kumele babe yingxenye yezinkundla zokuxhumana uma befisa ukusinda. Ngabelana nabo nempumelelo eminingi, noma kunjalo! Kuyindlela engikholelwa kuyo mathupha futhi ngithemba ukubona ukwamukelwa kwabantu abaningi - hhayi ngoba kungasetshenziswa ngamabhizinisi amabi - kepha ngoba kungasetshenziswa ngamabhizinisi amakhulu.
Ngikholwa ukuthi imithombo yezokuxhumana ihlanganisa amabhizinisi namathemba, yakha ubudlelwano obuthuthukisiwe phakathi kwamakhasimende nezinkampani, iphusha izinkampani ukuthi zenze ngcono ukuthengwa kwamakhasimende, zakhe izinto obala, futhi ikhuthaze ubuholi bokucabanga, ithalente kwezamabhizinisi kanye nokuziphendukela kwemvelo… konke okuhle ngebhizinisi.
Futhi lokho, bangane bami, kungokwami uchwepheshe imibono
PS: Nginesiqiniseko sokuthi uma ubuyela emuva ngokwanele kubhulogi yami noma ukuphawula kwamanye amabhulogi engihlukane nabantu abambalwa abazibiza ngobuchwepheshe babo. Manje sekuyisikhathi sakho. 🙂
Jul 14, 2009 ku-8: 48 AM
Ngikuthola kuthakazelisa ukuthi kumabhulogi amabili ahlukene ngifunde inani 'lochwepheshe' elibonakalayo. Kokuthunyelwe okubili engikufunde phambilini bekushiwo ukunganaki (futhi ngemuva kwalokho kungaqashwa) noma ngubani osebenzisa igama elithi 'uchwepheshe' njengengxenye yeziqu zabo, kepha uyajika bese ucaphuna eyodwa yama-athikili ebhulogi afanayo njengesizathu sokukubiza ngochwepheshe , nangemva kokucaphuna le ndatshana kusho ukuthi ungungoti. Manje yikuphi? Ngabe ngiyakwethemba ngoba uzibheka njengochwepheshe futhi ucaphuna uShankman, noma ngikushaya indiva konke okushoyo kusuka lapha kuye phambili ngoba uzibheka njengongoti futhi ucaphune uShankman? Ungangizwa kabi, ngiyakwazisa konke okufezile, futhi ngilandela ibhulogi yakho ngakho kusobala ukuthi ngithola ukubaluleka kulokho okushoyo… kodwa ukuphikisana okufana nalokhu yingakho amaklayenti ami edideke kangaka.
Jul 14, 2009 ngo-12: 28 PM
Sawubona Robert! Ngikuvuma ngokuphelele ukuphikisana - nobuzenzisi - engxenyeni yami kulokhu okuthunyelwe. Ngibhekisa kokunye okuthunyelwe ngoba ngingathanda ukuthi ingxoxo iqhubeke nemibono ehlukile. Esikhathini esedlule bengiligwema igama elithi 'uchwepheshe'. Njengoba ngiqhubeka nokwenza umsebenzi omningi emkhakheni, noma kunjalo, ngibona abantu abaningi ngokwengeziwe besebenzisa isihloko esithi 'uchwepheshe wezokuxhumana nabantu'.
Ngizithola ngiseqophelweni elithile lomsebenzi wami lapho ngikhathazekile ngokuthi amabhizinisi ayakhohliswa ngabantu abazibiza 'ngochwepheshe' kodwa amabhizinisi aqhubeka nokuwafuna. Ngiyaqhubeka nokubuka ibhizinisi liya kubantu abangenalo ulwazi noma 'ubuchwepheshe'? Noma - ingabe ngizimemezela njengongoti, ngifakazele ukubaluleka kwami, bese ngithola lelo bhizinisi?
Ngizozibiza ngochwepheshe kusuka lapha ngaphandle ngenxa yezinzuzo zebhizinisi. Futhi - ngiyabonga wena nabanye abafundi bami ningibambe ngibe sezingeni eliphakeme!
Ngiyabonga - ngiyawazisa impela la mazwana!
Jul 14, 2009 ku-6: 14 AM
Ngivumelana nawe Douglas. Kuthatha isipiliyoni seminyaka ngokukhipha okuhle (kufaka phakathi ukwehluleka komuntu, sibala kuphela ukuthi umuntu uvuke kanjani ngemuva kokwehluleka okunjalo yingakho kusathandeka) ukubizwa ngochwepheshe. Ukuba nezinkulungwane zabalandeli ku-Twitter akwenzi lokho.
Jul 14, 2009 ngo-12: 51 PM
Asikho esinye isiyalo engibone ngaso le mpikiswano enkulu ngokuthi ngubani onguchwepheshe, ongeyena nokuthi yini eyenza imigomo yokuthola isikhundla sobungcweti. Ngiyakuqonda ukukhathazeka njengoba nami, ngibonile abantu abaningi bezibiza ngochwepheshe bezokuxhumana kepha abanabo ubuchwepheshe bokumaketha abangahambisana nakho. Bayazi amathuluzi, kepha akubenzi uchwepheshe kwezokukhangisa besebenzisa imithombo yezokuxhumana njengesiteshi.
Ngibe ngumkhangisi iminyaka eminingi kunalokho engikukhathalelayo ukuvuma, futhi ngifunde isiyalo sokumaketha kuzo zonke iziteshi, ngisebenzisa zonke izinhlobo zamasu, kusuka kumasu kuya ekusebenzeni. Ukungeza imithombo yezokuxhumana njengesinye isiteshi sokumaketha kungukuqhubeka kwemvelo futhi kungenye, ngeshwa abathengisi abaningi abakunakanga kuze kube muva nje lapho bebona ukuthi bazithola kangcono lezi zinto.
Kepha ukuphela kwabantu abangakumemezela njengochwepheshe ngamakhasimende akho namakhasimende akho. Bangubufakazi obuqinisekisa leli gama.
Jul 15, 2009 ku-4: 13 AM
Ngiyavumelana nokuphawula kwakho ngenhliziyo yonke, igama elithi "uchwepheshe" lisetshenziswa ngendlela elula. Ngiyazi ngenqwaba yabantu abazimaketha njengochwepheshe ezinkundleni zokuxhumana kepha bebe abanye ababhali imibono namasu futhi bababize ngezabo. Ngisezinhlelweni njengamanje zokwakha nokwakha isu lezenhlalo lelinye lamaqembu amakhulu ezindawo ezithengisa izindlu futhi lokho kube yinto engivulela iso langempela. Ngivumelana noDeborah emazwaneni akhe, ukuthi amaklayenti namakhasimende kuphela angakuthwesa umaki wongoti. Ngisafunda isihogo esiningi futhi angisiye uchwepheshe, kepha ngiyasebenza kuso. Indatshana enhle
Jul 15, 2009 ku-4: 17 AM
Grrrrrrrrrrrrrr .. Kungani kuze kudingeke ukuthi simemezele ochwepheshe - angiyitholi yonke impikiswano. Ukubhodla nokuxoxa ngakho kususa amandla empilweni. Ingabe ukusetshenziswa kwamandla kuzuzisa ngempela?
Jul 15, 2009 ngo-5: 12 PM
Ngijwayele ukuvumelana nawe. Ngihlala ngizizwa ngiziqhakambisa ngokwami ​​ngesihloko esithi 'uchwepheshe'. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi amabhizinisi afuna 'ochwepheshe' futhi yilabo kuphela abasebenzisa isihloko abazotholakala.
Jul 17, 2009 ku-2: 10 AM
Ekukwazini nasekusebenzeni nawe kumaphrojekthi ahlukahlukene, ngingasho ukuthi ngikweseka ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uzibiza ngochwepheshe. Njengoba ushilo, isihloko sivela empumelelweni yakho kanye nokwehluleka kwakho njengoba kushiwo nguDavid ekuphawuleni kokuqala. Cishe iyaguga nawe, kepha ngiyazi ukuthi uma nginombuzo mayelana nokuthile okuhlobene nobuchwepheshe kanye nemithombo yezokuxhumana ngizothola impendulo ngokususelwa kulwazi, ulwazi nokwethembana. Yilokho engangikubheka kuchwepheshe kunoma yisiphi isihloko noma imboni.
Nov 4, 2011 ngo-12: 52 PM
UDoug, lokhu okuthunyelwe okumnandi ngezizathu eziningi.
1. Iqondile futhi ifinyelela ephuzwini: Ayikho i-BS engiyithandayo ukweqa ama-appetizers ngiye enkambweni eyinhloko.
2. Inembile: Noma iyiphi i-geek ingathola ukuthi ingayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana, kepha ochwepheshe bakhiqiza ibhizinisi (aka "the line line").
3. Kuthembekile: Sihlola imingcele emisha lapha eguquguqukayo futhi eshintsha ngokushesha. Ochwepheshe bangempela yilabo abazethembayo kodwa abathobeke ngokwanele ukuba bathembeke futhi bathi, "Angazi", bese bethola impendulo, esikhundleni sokuzenza ngathi bazi konke.
Nov 4, 2011 ngo-12: 56 PM
Kwaziswa kakhulu, Mike!